NEPAL'S KAKREBIHAR CONTROVERSY AND THE HISTORICAL RECORDS | The Himalayan Voice
NEPAL'S KAKREBIHAR CONTROVERSY AND THE HISTORICAL RECORDS
[Today, posted here is an article on 'Kakrebihar Controversy' (काक्रेबिहारमा बुद्द मूर्ति स्थापना गर्ने सम्बन्धी विवाद ) in Nepal. We have also heard that District Court Surkhet has ordered the concerned people to not install the graven image of the Buddha. Now, Nepal Government seems not interested in resolving the issue and therefore protests in Kathmandu are being reported in social media almost everyday.- The Blogger]
(Note: कांक्रे बिहार बौद्ध सम्पदाको क्षत्र हो भन्ने कुरामा विवाद छैन. मेरा ०५५ सालमा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन हेर्नुहोस. यो 'के किन भनियो? भन्ने मेरो पुस्तकमा प्रकाशित छ. यस पुस्तकको लागि मैले 'नेपाल कल्चर सेन्टर' लन्डनबाट 'इन्नोभेटिव अन्तराष्ट्रिय अवार्ड' २००८ मा पाएको थिएँ.)
यसको निर्माण कसले कहिले ग¥यो भन्ने प्रश्नमा रोचक कथाहरू सुनिन्छन् । यो कथाले लाटीकोइलीको ४०० बर्ष पुरानो मन्दिरसंग सम्बन्धित बनाएको छ । भनिन्छ कि लाटालाटी र सालीभेना बीच मन्दिर कसले छिटो बनाउने भनेर होड चलेछ । त्यसपछि लाटालाटीले शीव मन्दिर र सालीभेनाले यो भव्य कलात्मक निर्माण बनाउन लागेछन् । लाटालाटीले सानो मन्दिर बनाएकोले भाले बास्न अघि नै मन्दिरको निर्माण सिध्याएछन् । तर सालीभेनाले भने कलात्मक तथा ठूलै निर्माण गर्न खोज्दा भाले बास्न अघि यसको निर्माण सिध्याउन सकेनछन् । उनीहरूलाई बीचैमा छोडेर जान परेछ । त्यसैले अहिलेको यो सामग्री थुपारिएको स्थितिमा मात्र रहन प-यो । हार्ने साली भेनाको पैतालाको छाप अझै देखिन्छ भन्दै द्यौतीबज्यैको परिशरमा पूजिएर राखिएका एउटा झण्डै डेढ फिट बर्गाकारको चप्लेटी परेको एक इन्च जति बाक्लो ढुंगामा दुइजोडी पाइतालाको छाप देखाइन्छन् । तर ती हेर्दैमा कुँदिएका देखिन्छन् ।
यसको निर्माण पुरा भयो वा भएन त्यसको विवाद आफ्नै ठाउँमा छँदैछ । निर्माण पुरा भएको भएपनि नभएको भएपनि उपलव्ध सामाग्रीहरूले भनिरहेछ याहाँ निर्माणकार्य भयो नै । त्यो कसले ग-यो ? कुनै व्यक्ति वा गैह्रसरकारी संस्थाले यो बनाउन सकिने कुरा होइन भन्ने यसका एक दुई टुक्रा हेर्दैमा जोकोहीलाई पनि लाग्दछ । कुनै राज्यसत्ता र राज्यकोषको हात नभई यो बनेन नै । त्यो कुन राज्य वा राजा थियो जो यसको निर्माणमा संलग्न भयो ? । याहाँ प्रयोग भएका प्रस्तरको आकार प्रकार र कलाको गुणस्तरलाई हेर्दा सामान्य राज्य वा स्थायित्व नभएको राज्यले यो गर्न सक्ने कुरो अवश्यै लाग्दैन । तथा यो पनि लाग्छ कि एउटा राजाको राज्यकालमै वनिसक्ने कुरो पनि यो थिएन । अर्को उल्लेखनीय पक्ष यो पनि छ कि यसमा भएका कलात्मकता र वास्तुकला नेपालका कुनैपनि मन्दिर वा वास्तुकलासंग मिल्ने खालका छैनन् । नेपालीे भूभागमा पाइने नेवारी शैलीका कला र वास्तुकलाको यसमा छनकसम्म पनि छैन । साथै यी नेवारी कलाकृतिहरू भन्दा अवश्य नै कम गुणस्तरका छैनन् । अझ बढेर भन्ने हो भने सक्दोमात्रमा ठूलै ढुंगाहरूको प्रयोग गर्ने यसमा देखिएका प्रयासले बुझाउँछ कि नेवारी वास्तुकलामा नपाइएका विशिष्ठता यसमा छ । कलापक्षमै पनि यसमा पाइएका केही आकृतिहरू नेपालमा कतै प्रयोग नभएकाहरू पाइएका छन् ।
नेपालको इतिहास हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि अशोकचल्ल पछिका उनका उत्तराधिकारी जितारिमल्लदेखि आदित्यमल्लसम्म जम्मा ४ पुस्ताका राजाहरूले ५१ वर्षसम्म नेपालमा ७ पल्ट (जितारीमल्लले वि.सं. वि.सं. १३४४, १३४५ र १३४६ मा ३ पल्टसम्म, रिपुमल्ल, पून्यमल्ल र अदित्यमल्लले वि.सं. १३७८, १३८४, १३९१, १३९४ मा जम्मा ४ पल्ट) आक्रमण गरे । यी आक्रमणहरूको विशेषता यही रह्यो कि उनीहरूले प्रत्येकपल्ट आगो लाउने, शहरवासीलाई बनतिर धपाउने र रित्तो शहरमा लुटपाट मच्चाएर फर्कने तथा पछिल्ला पटकका आक्रमणहरूमा करदमा पारेर फर्कने गरे । अर्थात राज्य हत्याउने प्रयत्न यी थिएनन् । धनसम्पति जुटाउने प्रयत्न थिए । ठूलै नोक्सानीहरू सहेर गरिएका यस्ता आक्रमणहरू सीर्फ धनकैलागि गरिन्छ भने त्यस्तो के आवश्यकता थियो यी राजाहरूलाई ? विशेष एउटा स्थीर र सम्बृद्धीशाली राज्यमा ? के यही मन्दिर बनाउने पुख्र्यौली जिम्मालाई पुरा गर्न यस्तो गरेका त थिएनन् ? यो बलियो सम्भावना छ ।
सुरक्षेत्रको अर्थ हुन्छ देवताहरूको स्थान । किमवन्तिहरूले भनेका देवताहरूको क्षेत्र, अनि यीनै भग्नावशेषलाई देवताको दरवार भन्नु के यसैको संकेत त होइन ? यता सुरक्षेत्र जस्ता राजाहरू बसेर रचना गर्ने पूण्यभूमी कतै भेटिएका छैनन् । र याहाँ नै आजको आश्चर्यकै सीमाको भव्य निर्माणको अवशेषले नामसम्म पाएको छैन । यसको अर्थ के लाग्छ ? म विश्वस्त छु यस मन्दिरको पुनर्रुद्धार कार्य गरेमा तल कसैको नभएपनि रिपुमल्लका शिलालेख वा केहीनकेही संकेत अवश्यै भेटिनेछन् । रिपुमल्ल भनेको आफ्ना किर्ति राख्न अत्यन्तै सचेत राजा थिए । उनले अरूकै स्तम्भमा समेत आफ्ना नाम खुदाउन पछि नपरेका प्रमाण छँदैनै छ ।'उनले निग्लिहवा र लुम्विनीका अशोकस्तम्भहरूमा क्रमशः “ॐ मणी पद्मे हुँ श्री रिपुमल्लश्चिर जयतु” र “ॐ मणी पद्मे हुँ श्री रिपुमल्लश्चिरञ्जयतु संग्राम (म) ल्ल जयः” भन्ने अक्षरहरू खुदाएका छन् ।१०"
जि.सि.जीको पहिलो अडकल यो छ कि यो मन्दिरलाई दिल्लीसम्राट गयासुद्दीन तुगलकले वि.सं. १३८१ (यो १३८२ हनुपर्छ) मा वंगालको विद्रोह दवाएर यही बाटो गरी फर्कने क्रममा सिम्रौनगढ धोस्त पारेपछि यसलाई पनि यता पसेर धोस्त पारेका हुन सक्छन् । गोपालराज वंशावली अनुशार वि.सं. १३८२ मा गयासुद्दिन सिम्रौनगढतिर आउँदा राजा हरिसिंहदेवले उनीसंग युद्ध गरेर हारेको र आफै भागेको भन्ने देखिन्छ । तर गयासुद्दीन त्यताबाट कता गए भन्ने कुरा यसमा उल्लेख छैन ।११ यसमा पहिलो ता गयासुद्दीन यही बाटो फर्के होलान् भन्ने एउटा अडकलै मात्र देखिन्छ । दोश्रो, उनले यही बाटोबाट फर्केर यसलाई ध्वस्त पारेका भए निश्चयनै त्यस काल वा त्यसपछिका राजाहरू आदित्यमल्ल, कल्याणमल्ल, पुन्यमल्ल र पृथ्वीमल्लका वि.सं. १३९५ सम्मका शिलालेख, कनकपत्र, ताम्रपत्र आदिमा कतै न कतै यसको वर्णन पर्नपर्ने थियो ।१२ यत्रो ठूलो घटनाको कहीँ कतै वर्णन भेटिएको छैन । यो घटना अलि पछि नै घटेको हुनसक्छ । बरू वि.सं. १४०६ मा शमसुद्दीनले नेपालमा आक्रमण गरेको बेलामा१३ यता पसेर विध्वंश ग-यो होला भन्ने सोच अलि बलियो प्रतित हुन्छ ।
त्यसवेलातिर खसहरूका राज्य अन्त हुने स्थितितिर आइपुगेका थिए १४ यस्तो अवस्थामा ठूला घटनाहरूको अभिलेख राख्ने मनस्थितिको ता कुरै भएन राज्य जोगाउनै हम्मे परिरहेको थियो । त्यो राज्य समसुद्दीन जस्ता आततायीको प्रतिकार गर्ने अवस्थामा निश्चयनै थिएन । त्यसैकारण समसुद्दीनको आक्रमण त्यो पनि राज्यको दक्षिणी भागमा भएकोलाई खसराजाले नीच मारेर ध्यान दिएनन् । हुनसक्छ आक्रमण पछि झनै टाउको उठाउने स्थितिमै उनीहरू रहेनन् र निमार्णको उद्धार गर्ने त कुरा परै रह्यो यसलाई पुरै विर्सन नै कर प-यो । अथवा हुनसक्छ त्यसवेलासम्ममा दक्षिणतिरकै सामन्तहरूले यो भेग आफ्ना हातमा पारिसकेका थिए र उनीहरूले पनि यसलाई जोगाउन सकेनन् र यो धारासायी भयो । अन्ततः यसको लेखा राख्ने नै कोही नभएर वेवारिसे ढंगमा पतन भयो ।
जि.सि.जीको तेश्रो र अन्तिम सोच खस राजाहरूको पतन पछि यसको उचित संरक्षण हुन सकेन भन्नेछ । अँैलोको प्रकोपको कारणले यो उपत्यका नीर्जन बन्यो र कुनै ठूलै भूकम्पले यो ढल्यो होला भन्ने अड्कल छ । खस राजाहरूको पतन राजा अभयमल्ल को पालामा वि.सं. १४३३ पछि केही बर्षमै सामन्तहरूको हातमा गएपछि भएको देखिन्छ । खसहरूको राज्यपतनसंग यसको पतनको सम्बन्ध छ भने त्यो यो हो कि यो निर्माण पूरा नहुँदैमा नै राज्यको पतन भइसकेको हुनुपर्छ । चाहे त्यहाँ समसुद्दीनको आक्रमण होस् वा न होस् । यदि समसुद्दीनको आक्रमण यता भएको थिएन भने यही भन्न पर्ने हुन्छ कि जव सामन्तहरूले टाउको उठाउन लागे तवदेखि नै पृथ्वीमल्ल र उनका उत्तराधिकारी अभयमल्लले राज्यको दुरावस्थालाई नियन्त्रित गर्न नसकेको अवस्थामा यसको निर्माण कार्यलाई नै छोडिदिए होलान् । खसराज्यको पतनपछि सुरखेतको भेग एउटा सामन्तको हातमा प-यो र उसले यसको निर्माण कार्य पुरा गर्ने कुरै रहेन र यो पूर्णतः त्यक्त र वेवारिस हुन पुग्यो होला । याहाँ भन्दा बढी सम्भावाहरू आँक्न नसकिने स्थिति छ ।
यस निर्माणका सवै भागहरू त्यहाँ नै सुरक्षित छन् । माथिल्लो भाग मात्र ढलेर तलका भागहरू यथावत रहने राम्रै सम्भावना छ । माथिका भागहरूलाई पन्छाएमा तलका अंशलाई अवश्यै देख्न सकिने छ । तर यदि अन्य सम्प्रदायका शत्रुहरूले यसलाई ढालेका हुन् भने फेदैलाएर ढालेका हुनसक्ने हुँदा तलका अंशहरू जस्ताको तस्तै नरहेका पनि हुन सक्छन् । तथापि तल हेर्ने कार्य फलदायक नै हुन सक्ने मेरो सोच छ । यस प्रयाशले यसमा तलका भाग देखिने मात्र होइन कि त्यहाँ मूलमूर्ति तथा अन्य धेरैखाले मूर्तिहरू हुनसक्ने साथै शिलालेखहरू पाइनसक्ने ठूलै सम्भावनाहरू छन् । अझ त्यसताका प्रयोग हुने सरसमानहरू, पूजाका सरदाम, सिक्का, हातहतियारहरू आदि हुनसक्ने सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै छन् । माटोको जडान नभएको मन्दिर भएको हुँदा तल पाइने सामग्रीहरूको वास्तविक स्वरूप नविग्रेका हुनसक्छ । वा विग्रेको भएपनि उनका स्वरूपलाई हेर्न बुझ्न वा अध्ययन गर्न सजिलो पर्ने छ । त्यति मात्र होइन भवितव्य परेर यो मन्दिर ढलेको रहेछ भने नरकंकालहरू समेत हुनसक्ने सम्भावना छँदैछ । विजातीहरूले ढालेका रहेछन् भने ढाल्ने औजारहरू पाइनेछन् । विजातिहरूसंग संघर्ष भएको रहेछ भने हातहतियार समेत पाइनेछन् । मन्दिर भित्र पाइने सामग्रीहरूको अध्ययन गरेर यो मन्दिरको पतन कसरी भयो भन्ने कुराको अध्ययन सजिलै गर्न सकिनेछ । उत्खनन् कार्यले यसको पतन मात्र होइन कि यसका सम्पूर्ण इतिहास कोर्न नै सधाउ पु-याउने छ । निर्विवादैछ ।
1. Medieval Nepal - Part I, .Dr. DR. Regmi